Siyaarada caalimkii weynaa ee Sheekh C/raxmaan Celi oo ka dhacday degmada Warsheekh + Sawirro | Maanta Online
Home / Islam / Siyaarada caalimkii weynaa ee Sheekh C/raxmaan Celi oo ka dhacday degmada Warsheekh + Sawirro
Posted by: admin in Islam, Wararka November 8, 2014	Comments Off on Siyaarada caalimkii weynaa ee Sheekh C/raxmaan Celi oo ka dhacday degmada Warsheekh + Sawirro 490 Views
Degmada Warsheekh oo ka tirsan gobolka Sh/dhexe waxaa lagu soo gabagabeeyay siyaaradii Sheekh C/raxmaan Celi oo ahaa Sheekh dalka iyo caalamka oo dhan si weyn looga yaqaanay, waxaana siyaaradaasi ka soo qeyb galay madax ka tirsan maamulka gobolka Sh/dhexe, culumaa’udiin, iyo dadweyne fara badan, kuwaasi oo iyagu ka yimid gobolada dalka qaarkood.
Waxaa ka mid ahaa mashaa’iqda ka soo qeyb gashay siyaarada Sheekhu Qaadiriya Sheekh Uweys Sh. Muuse, Sheekh C/qaadir Sh. Cabdi Cumar (Boqorka), Sheekh C/raxmaan Macallim Axmed madaxa dariiqada Seyliciya, madax ka tirsan maamulka Gobolka Sh/dhexe iyo culimo kale oo fara badan.
Madaxa dariiqada Sayliciya Sheekh C/raxmaan Macallim Axmed oo faahfaahin ka bixinayay siyaaradaasi ayaa sheegay in Sheekh C/raxmaan Celi uu geeriyooday sanadkii 1981-kii, isla markaana arrimo nabadgelyo awgood dib loo dhigay muddo afar sano ah in la siyaarto.
Waxa uu sheegay in Sheekh C/raxmaan Celi uu caan ku ahaa fidinta diinta Islaamka, iyo baridda culuunta kala duwan ee Islaamka, isagoona soo saaray Kutub fara badan oo qaarkood ay yaalaan jaamacadda Azhar ee dalka Masar ku taala.
Sheekh C/qaadir Sh. Cabdi Cumar (Boqorka) oo uu dhalay caalimka weyn ee Sheekh C/raxmaan Celi ayaa khudbad kooban u jeediyay ka qeyb galayaasha siyaarada, isagoo uga mahad celiyay ka qeyb galkooda, wuxuuna sheegay in siyaaradani ay tahay mid culumaa’udiinkii, mashaa’iqdii iyo xertii uu Sheekha diinka soo baray u noqoneysa taariikh wanaagsan.
Ka qeyb galayaasha siyaarada ayaa halkaasi uga duceeyay dhammaanba shacabka Soomaaliyeed in dhibaatada heysata maanta uu ka dulqaado, gaar ahaan abaaraha iyo colaadaha ka dhacaya guud ahaan dalka, iyadoona halkaasi roob tuug loogu sameeyay shacabka Soomaalieed ee ku dhibaateysan dalka gudihiisa.
Wixii faahfaahin ah kala xiriir Guddoomiyaha Sayliciyada
Sheekh C/raxmaan Macallim Axmed
Previous: Guddoonka Baarlamaanka oo shaaciyay xilliga uu dhacayo mooshinka lagu ridayo Ra’iisal Wasaaraha
Next: Iska tag Turkiyoow Muqdisho ma aha meel laga macaasho!!